Industrial cleaner wezindlu ngokuba ungumhlabathi ukhonkolo iye yasetshenziswa ngempumelelo ezindaweni zokwakha. Kwezinye izimo, kukhona isidingo ukusebenzisa imishini enamandla kangaka futhi endaweni yasekhaya. Uma uhlela ukuba ukulungisa, kuba impela kuyinto engenakwenzeka Nokho ukuthenga vacuum cleaner nokuba angasetshenziswa ezimbonini, leli thuluzi kufanelekile amaqembu professional. Kubalulekile ukuthi waba ini izici lobuchwepheshe lapho ukhetha.
Ngokungafani cleaner zezimboni wezindlu yasendlini
Uma siqhathanisa lezi izilinganiso ezingamakhulu amabili, bayoba kuqala kunazo zonke kube ezahlukene izici zangaphandle kanye ukumisa. Sinenkosi ezindaweni ezehlukene ukusetshenziswa kanye nezici. Lokhu kuvezwa obala isisindo futhi ubukhulu zezimboni cleaner wezindlu ibe yinkulu ngenxa khona kuzenze zibathinte nakakhulu amandla motor. Ngaphakathi the isitsha isethwe ezinkudlwana, ngakho ukuhamba imishini kuyehla. kudivayisi Omkhulu siyohlale ukuhambisa phezu kancane kanzima, ngakho lezi amayunithi futhi eside hoses nezimo futhi tubing yobukhulu ezifanele. Thina echazwe idivayisi ngaphezulu nani elihlaba umxhwele Imibhobho esemzimbeni kunabantwana Amadivayisi ekhaya. Ungakwazi ukubala on a high amandla ukuncela.
Ukukhetha i-industrial cleaner wezindlu ngokuvumelana ngezigaba
Uma unquma ukuthenga zezimboni cleaner wezindlu ngokuba ungumhlabathi ukhonkolo, kubalulekile ukwazi ukuthi imishini ihlukaniswe izinhlobo ezimbili ezibaluleke kakhulu, okuwukuthi, amadivayisi ezimbonini kanye ekilasini ezimbonini kanye lobuchwepheshe ahlobene. Basuke zihlukaniswa ivolumu ethangini, ekuqaleni ayivamile ifinyelela 75 amalitha, kanti owesibili kungase elilingana 120 amalitha. Uma udinga ukukhiqiza ukusebenza yesikhathi eside ngaphandle kokuphazamiseka, kufanele ukhethe cleaner wezindlu grade ezimbonini kanye lobuchwepheshe. Abanye onobuhle ongenza ngisho ingxenye umjikelezo zokukhiqiza, ngokuba sase ezibekwe phezu ibhande elihambayo, lapho ukusebenza iminyaka eminingi, ephumula kuphela ukuze kukhucululwe esitsheni uthuli. Phakathi kwezinye stop Kwenziwa yini ukuthi ungene esikhundleni motor cleaner, umthombo okuyinto amahora 20 000.
Kukhethwa nemishini amandla kagesi kanye nokusebenza
Uma unquma ukuthenga zezimboni cleaner wezindlu ngokuba ungumhlabathi ukhonkolo, kubalulekile unake okukhethekile ezibekiweko eyisisekelo. Ngakho, amandla kagesi kuthinta inani kudliwe amandla kagesi kanye nokusebenza. Elithe ukukhuluma, yasendlini cleaner wezindlu, njengoba umthetho, ifakwe i injini kabani umthamo zokhahlamba kusuka 1000 kuya 1400 Watts, kodwa onobuhle zezimboni, lesi sibalo kungenzeka ukufinyelela ezingeni 7,000 Watts. Uma une izinhlelo ukusebenzisa idivayisi ezingaphezu kweyodwa, kanye nokunye, kufanele ukhethe i kwemboni ukuthi ine ukusebenza ezengeziwe. Ngokwesibonelo, endabeni imishini okuhloswe ngalo ukuba afeze izinkinga ezinkulu, kufanele kube izisekelo, okuyinto yenzelwe ukusetshenziswa namadivayisi eziningi kanyekanye.
Industrial cleaner wezindlu ngokuba ungumhlabathi ukhonkolo kufanele bakhethwe kuncike ekusebenzeni, okuyinto kunqunywa amandla. Enamandla ngokwengeziwe Phiko, aba maningi inani uthuli umzuzwana uyokwazi ukuqeda. Uma kuziwa ngezinga ezimbonini, kubalulekile ukukhetha imodeli ukuthi uyakwazi ukuncela mayelana 70 amalitha ngomzuzwana, ukuxazulula izinkinga zasekhaya, lokhu ipharamitha kungaba ulingana amalitha ngomzuzwana 50.
Kukhethwa nemishini isikhwama umthamo uthuli namandla ukuncela
Esikhathini imishini echazwe zibaluleke kakhulu cleaner zezimboni izikhwama wezindlu. Isikhwama Umthamo onobuhle yasekhaya ngokwesilinganiso kusuka amalitha 20 kuya 50, mayelana izitshalo zezimboni, lokhu ipharamitha lingadlula amalitha 100. Uma ungafuni ukubhekana inkinga edinga nokuphazamiseka njalo emsebenzini ukuba kukhululwe isitsha kuvela othulini, kungcono ukuba ukhethe umthamo umxhwele ngaphezulu ngalendoda uthuli. Kungenjalo, yokufuna ezingase zingenzeki.
Industrial vacuum cleaner omkhathi ngokuba ungumhlabathi libhekene ngaphezulu amandla ukuncela, okuyinto kuncike degree of dilution. Efaneleka kakhulu inkomba imvume umusa sibalo ku uhla kusuka mbar 17 kuya ku-250. On ukudayiswa ungathola onobuhle abafumana, ngokuvamile libhekisela onobuhle zezimboni, okuyinto zenzelwe ukususa uthuli olusindayo.
Khetha u-Amadivayisi ukuseviswa kanye ukusefa uhlelo
Umthelela kule ipharamitha kubonisa inqubo uthuli ukubuthwa. Ngokuvamile, ukungcoliswa faka isikhwama, okungase kwenziwe indwangu noma iphepha, inketho yokugcina kuyinto kunesithembiso kangcono izinhlayiya emihle ukulishintsha kuyoba lula kakhulu. onobuhle kwesikhathi - ke vacuums, elingenalo isikhwama. ngaleyo ndlela Umbhedo eqoqwe egumbini, okuvumela kusheshe futhi kube lula ayibulale kuka uma usebenzisa esikhwameni standard.
Uma ukhetha uthuli cleaner wezindlu, kubalulekile ukuba banake futhi ohlelweni filtration. Uma sikhuluma izinguqulo kwezohwebo, bavumela ukuba enze yokuhlanza kokubili nesasehlobo, ngaphandle esikhundleni zokuhlunga. Kwezinye izinhlobo ukuhlanza ukuhlunga ngokuzenzakalelayo ngenxa vibration, okuyinto ebalulekile inqubo wokuhlanza uthuli ukhonkolo. Ungakhetha umzimba okuyinto kusikisela ukuba khona inkinobho kusebenze isihlungi yokuhlanza ukusebenza kwimodi semi-automatic.
iseluleko lochwepheshe kukhethwa
Uma unquma ukuthenga vacuum cleaner othulini, kubalulekile ukugxila isilinganiso amandla ukuncela. Kuzoba enkulu nje ekuqaleni, kodwa ihlala imizuzu 5 inqubo yokukhula liyancipha ngu contaminations azisizi okuyisilinganiso sabangu-20%. Uma unganelisekile le ndlela, kungcono uthenge imodeli enikeza ukulawula lo msebenzi.
Khetha ukugoqa imodeli
Uma ecabanga ukuthi ukukhetha zezimboni cleaner wezindlu ngokuba ungumhlabathi ukhonkolo, kubalulekile ukuba acabangele imishini. I ngokuvamile izikhwebu nge onobuhle zezimboni kukhona Imibhobho esemzimbeni, ngalinye elikwazi yakhelwe ukwenza umsebenzi walo, eziningana hoses amayunithi edingekayo emazingeni ahlukahlukeneko wendlela umsebenzi. Ngakho, ngosizo Imibhobho esemzimbeni, ungakwazi usule ebusweni phansi ukususa ukungcola kusuka ukuvuleka ewumngcingo, kanye unamathisele zonke izinhlobo amathuluzi amandla.
izici ezibalulekile lapho uthenga
Uma ufuna ukuthenga wezindlu isakhiwo ngokuba ungumhlabathi ukhonkolo, kubalulekile lapho ukhetha ukuba banake amaphuzu abalulekile, ezibalwe ngezansi. Uma kudingekile, xhuma imishini amandla, okuyinto akhishwa nezinye abakhiqizi, kumele ube efanele uxhumano diameters. Kungenzeka ukuthi ukuxhumeka uzodinga ukuthenga adaptha ekhethekile. Cleaner wezindlu lokuqoqa uthuli ukhonkolo, noma yini kwaba izinga, unekhono sokudiliza ngemva kwenkathi ethile yesikhathi ngesikhathi ukusebenza. Ngakho-ke kubalulekile ukubuza yokwanda okudlekayo. Kwezinye izimo, ukuthola izingxenye kungaba nzima kakhulu, okuyinto sici brand ngamunye.
Kungakhathaliseki ukuthi nikhethe zezimboni cleaner wezindlu ngaphandle esikhwameni uthuli?
Amadivayisi anjalo babizwa nangokuthi cleaner wezindlu zasezindaweni. Bona udoti wenziwa iphethini nesiphepho. Iyunithi has ngalendoda uthuli ngesimo esitsheni. Umoya kanye uthuli, kanye ngaphakathi, baqale ukwenza ezinyakazayo Kuvunguza, bese kukhula ngesivinini. Imfucumfucu ngaphansi kwethonya amandla centrifugal, ushaya ebusweni ethangini, ke phinda ijubane evumela ukuba liwele phansi. Uma unquma ukuthenga vacuum cleaner ukuze bahlanze uthuli ukhonkolo, kufanele wazi ukuthi kunezinzuzo eziningi, phakathi kwabo kukhona lula ukusetshenziswa, kanye ukungabi khona izindleko for yokufuna izikhwama ezintsha. Nokho, akunakwenzeka ukuthi ukuqaphela nemibi, ukuthi, ukuthi yokuhlanza ithangi kungase kudingeke uxhumane ne uthuli. Uma sicabangela lezi zindlela, bese ukhetha imodeli yemboni cleaner wezindlu kuyoba lula kakhulu, ngoba uzokwazi ukucacisa izidingo zedivayisi.
Uma ukhetha phakathi imodeli ukuthi has a tank eyenziwe ngepulasitiki noma insimbi engagqwali, lona wamuva kuyinto athembeke. Metal ipayipi kuhlale isikhathi esingaphezu okulingana plastic.
Ingabe Ngidinga imodeli kwezentengiselwano indlu?
Uma unesithakazelo ekwakheni vacuum cleaner ukuqoqa uthuli ukhonkolo, kubalulekile ukuthi uthathe isinqumo sokuthi ufuna imodeli ezifana ekhaya. Uma sihlanzekile uthuli ukhonkolo nge ezivamile cleaner wezindlu, esiklanyelwe kuphela short-term imithwalo, thuluzi isihlungi kweso ugcwaliswe ukungcola olungena kwinjini. Ngemva kwalokho, idivayisi ngeke kudingeke ukuthi sikuthumele iyokhandwa. Uma sikhuluma bezfiltrovom cleaner wezindlu, ke ngeke abe namandla lapho ebhekene nale nkinga, kusukela ukungcoliswa ezinjalo ngeke chaza emanzini, wabuyela ekamelweni futhi. Lokhu kubonisa ukuthi vacuums zezimboni zenzelwe uthuli ukhonkolo, futhi kwezinye izimo, azinakusilela emkhayeni.
Ngaphandle ukusetshenziswa imishini echazwe Awukwazi ukwenza lapho imishini noma imishini inqwaba izimbobo, kanye Ukudilizwa izindonga ukhonkolo kanye ngodonga usebenzisa amathuluzi professional. Industrial cleaner wezindlu kuyodingeka esimweni uma kuziwa zisebenzisa ngesikhathi ukulungisa engela grinder noma ezinye ithuluzi ephoqelela i amandla kagesi ukuze inzuzo okusezingeni eliphezulu.
Uyozizwa isidingo kule divayisi uma ingasetshenziswa, imishini ngeke elingenalo uthuli isizinda izinhlelo. Ngemva kokuphothulwa ekwakheni indlu noma kulungiswe ezinkulu, uzodinga iyunithi. Esinye isici esihle zezimboni vacuum cleaner omkhathi - liwukuthi senqubo yokukhiqiza, basuke benawo ukusebenza ewusizo, obonakaliswe lwenethiwekhi nge adapters ekhethekile ithuluzi uthuli ezibuthezela. Kubalulekile anqume kusenesikhathi ungagcina ngesikhathi sokuthenga, ngoba kubalulekile ukuthi ukulungiswa awuzange ephelezelwa ngokwahlukana enchubeni.
Uxhumano sokuprakthiza. ukukhetha lesifanele
Isitimu umusi isicupho. Umgomo we operation ye isicupho umusi
Ithoshi Acetylene: idivayisi ukusebenza isimiso, ikakhulukazi
Ayia Napa ezikhangayo futhi pilgrimage
Buso ezenziwe ngobumba ngokuba ubuso
Indlela ukususa iphasiwedi ye-Windows 8? Setha kabusha iphasiwedi ye-akhawunti zendawo, "Microsoft", "Umqondisi"